यस्तो छ महानायकको सिग्नेचर पोजभित्रको रहस्य
महानायक राजेश हमालले खिचाएका पछिल्ला तस्विरहरू नियाल्नुभएको छ ? पक्कै छ होला । सामाजिक संजालहरुमा उनका यी तस्विरहरूमा कमेन्ट, लाइक, शेयर गर्नुभएको होला ।
हमालका एक से एक तस्विरलाई नियाल्नुस् त । उनका पोजहरु पनि नियाल्नुस् । तपाईले हमाललाई पहिले भन्दा भिन्न पाउनुहुनेछ ।
रियल लाइफमा भेटिएका शुभचिन्तक, फ्यान अथवा एक्लै तस्विर खिचाउनुपरे हमालको बुढी औंलो उठ्छ र चार वटा औंला मुठी पर्छ अर्थात थम्स अप हुन्छ । हमालले खिचाएका अधिकांश तस्विरमा उनले ‘थम्स अप’ वाला पोज दिइराखेको भेटिन्छ ।
सामाजिक संजाल र इन्स्टाग्राममा निकै सक्रिय हमालले दैनिकजसो तस्विरहरू हालिरहेका हुन्छन् । उनले सार्वजनिक गरेका अधिकांश तस्विरमा उनी निकै खुलेको देखिन्छ । ति तस्वीर हेर्दा उनको सिग्नेचर पोज थम्स अप रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
हमालले थम्स अप वाला पोजलाई ब्राण्ड बनाएका छन् । हमालको यो ब्राण्ड पोज भित्रको रहस्य के होला त ?
हालै एक भेटमा हमालले यो रहस्य खोले, ‘यो सबैका लागि राम्रो होस्, शुभ रहोस् भन्न खोजेको हो । यसमा खासै अरु केहि छैन ।’ हमालका अनुसार थम्स अप वाला पोजले आफु पनि खुसी रहेको र अरुको पनि शुभ रहोस् भन्ने संकेत दिने बताउँछन् ।
थम्स अप वाला पोजको उत्पत्ती कसरी भयो ? त्यो हमाललाई थाहा छैन । यो पोजमा हमाल कसरी प्रभावित भए भन्ने पनि पत्तो छैन । तर, यसले अरुको भलो गरोस् भन्ने दर्साउने हमालको बुझाई छ ।
चलचित्र नखेल्दा झन् बढि व्यस्त देखिएका हमाल अहिले रियल लाइफमा रमाइरहेका छन् । घुम्न मन लागेका स्थान पुगेका छन् । श्रीमती मधुलाई समय दिइरहेका छन् ।
चलचित्रको पर्दाबाट अलिकति टाढा रहेका हमाल अहिले म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरिरहेका छन् । तर, चलचित्रका कुनैपनि स्क्रिप्टमा भने उनले चित्त बुझाएका छैनन् ।
सुशान्तको सम्झना गर्दै बहिनी श्वेताले गरिन् भावुक पोष्ट
राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर पद रिक्त, छिट्टै नियुक्तिको तयारी
कालीगण्डकी दोहनले शालिग्राम शिला क्रमशः लोप हुने अवस्थामा
'मेरा जनता भोकले मर्न आँटे' भन्दै राउटे अगुवाको मुख्यमन्त्रीसँग गुहार
उत्तरी नाकाबाट पहिलो पटक मल ल्याइँदै
प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बहुमतको दावी सही ठहरिए सयौंको पद धरापमा
गाडी चलाउँदा जुत्ता अनिवार्य